Global Voices teny Malagasy » Nosokafan’i Maraoka Ny Fampiasa VoIP Alohan’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana Momba Ny Fikorontanan’ny Toetr’andro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Oktobra 2016 17:32 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Tsy namoaka fanambarana ofisialy mikasika ny fanesorana ny fandrarana ny sampan-draharaha mpanara-maso ny tontolon'asa fifandraisandavitra ao amin'ny firenena (fantatra amin'ny fanafohezan-teny Frantsay, ANRT) na vonjimaika izany fanesorana fandrarana na noho ny vokatry ny fiovana ara-politika. Na izany aza, nanombatombana ireo Maraokana mpisera fa natao noho ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana Momba Ny Fikorontanan'ny Toetr'andro  (COP22) izao fanesorana fandrarana ao an-tanànan'i Marrakesh izay hotontosaina eo anelanelan'ny 7 sy 18 Novambraho avy izao. Inoan'izy ireo fa hiverina amin'ny laoniny indray ny fandrarana raha vao tapitra ny fihaonambe .
Faniratsirana ny Maraokana izay entina ho ambany noho ny olona ny fanesoran'i Maraoka ny fandrarana ny #VoIP  mandritra ny #cop22  . https://t.co/ 7zvJgQ2cDG 
Nametraka ny fandraràna ny fampiasa VoIP ny ANRT anisan'izany ny WhatsApp, Skype ary Viber tamin'ny fiandohan'ity taona ity noho ny lalànan'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ny 1996 ao amin'ny firenena, izay mametraka  ny rafitra tsy maintsy hahazoana lisansa ahafahana manome tolotra fiantsoana .
Tsy mbola niverina amin'ny laoniny ny fidirana amin'ireo tolotra ireo na dia teo aza ny hetsi-panoherana  avy amin'ireo mpisera tezitra ka nanao ankivy ny orinasan'ny fifandraisandavitra nandritra ny roa andro. Tsy maningana anefa i Maraoka amin'izany tranga izany. Manao fanakanana amin'ny ampahany na manontolo ny fitondram-panjakana maro hafa manerana ny faritra MENA (Afrika Avaratra Afovoany Atsinanana), fara fahakeliny fampiasa VoIP iray, toy ny asehon'ny sarintany etsy ambany ao amin'ny igmena.org  .
Nefa izao kosa, misy vidiny ara-toekarena ny fandraràna. Araka ny tatitra  avy amin'ny Foibem-Panavaozana Teknolojia Brookings momba ny fibahanana sy fahatapahan'ny aterineto dia misanda 320 tapitrisa dolara amerikana amin'ny harin-karen'ny firenena ny fanakatonana ny fampiasa VoIP manerana ny firenena tao Maraoka tao anatin'ny 182 andro, nandany ny harin-karena faobe tao amin'ny firenena. Taorian'ny fandrarana tamin'ny volana Janoary, naneho  ny ahiahiny ihany koa ireo mpandraharaha Maraokana fa mety hanelingelina ny fampandrosoana ny raharaham-barotra vao misondrotra ny fandraràna, indrindra fa ho an'ireo izay miantehitra amin'ny tolotra VoIP mba hifandraisana amin'ny mpanjifa iraisam-pirenena .
Ankoatra ny sanda eo amin'ny fihariana, miankina amin'ny ain-dehibe indraindray ny fanakanana ny antso sy fampiasa fandefasan-kafatra, indrindra fa amin'ny fotoanan'ny korontana sy ny fifandirana. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity tao Yemen, voalaza fa nanakana  ny WhatsApp ny tafika Houthi, izay nanakantsakana ny fahafahan'ny olom-pirenena hifandray, nosakanana hatramin'ny niandohan'ny ady ny kaonty hifanontaniana amin'ny [filaminan'ny] ny tsirairay, nosakanana koa ny fizaram-baovao ao amin'ny firenena ahitana tranonkalam-baovao am-polony maro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/27/90760/
 Fivoriamben'ny Firenena Mikambana Momba Ny Fikorontanan'ny Toetr'andro: http://www.cop22.ma/